PressReader - Kwayedza: 2017-11-03 - Vana 2 vakany’ura mumugodhi
Vana 2 vakany’ura mumugodhi
Kwayedza - 2017-11-03 - Bvunza/mukwende - Kingstone Mapupu
VANA vaviri vanove mukoma nemunin’ina vakawira mumugodhi uzere mvura vose ndokufa nemusi weMuvhuro svondo rino apo vaitamba pamba pevabereki vavo kuEpworth, muHarare.
Tsaona iyi yakaitika panhamba 178 kuWard 2 Tembwe apo Motion Mumbo ane mwedzi 11 yekubekwa nemukoma wake, Rine Muchero aive negore nemwedzi mishanu yekuberekwa vakawira mumugodhi.
Vana ava vainge vasiiwa pamba vari voga apo vakazonotambira pamugodhi waiva wakavharwa netayi nerata pamusoro — vose ndokuwira mumvura.
Vanaamai vevana ava mukoma nemunin’ina vemudumbu mumwe chete vanoti Josphine Chimwara (31) anove amai vaMotion naPrecious Chimwara (34), amai vaRine.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare, Assistant Inspector Simon Chazovachii vanotsinhira nyaya yekufa kwevana ava.
Vanokukurudzira vabereki kuti vachengetedze vana nguva dzose uyewo nekuti vanhu vavakire migodhi yavo.
Mumiririri weEpworth mudare reNational Assembly, Cde Zalerah Makari vanoti kufira kwevana mumigodhi kwanyanya munzvimbo iyi.
“Tinonzwa kuti Precious Chimwara, anova amai vemumwe mwana ashaika, vainge vaenda kunotenga matomatisi vachisiya vana ava voga. Uyuwo Josphine Chimwara, amai vemumwe mwana ashaika, vange vaenda kubasa. Tinokurudzira kuti vana vachengetedzwe nguva dzose,” vanodaro.
Kwayedza yakasvika panzvimbo iyi ndokuwana mitumbi yevana ava ichangonyururwa mumvura uye vanonzi vaiva vawira nenguva dza10 mangwanani.
Precious naJosphine Chimwara havana kukwanisa kutaura zvakawanda nevatori venhau kunze kwekuti varasikirwa zvikuru.
Agnes Chimwara (29), anove munin’ina wemadzimai maviri aya, anoti Precious akabva pamba achisiya vana ava vari voga achienda kunotenga matomatisi pamusika uri padyo apo pakazosara pachiitika tsaona iyi.
“Sisi Precious vabva pamba vachinotenga matomatisi ndokusiya vana ava apo mukuru wacho Rine anonzi azotanga kunotambira pamugodhi. Mudiki uyu Motion anonzi azotevera achikambaira ndokunogara pamusoro pemugodhi apo rata ranga rakavhara razokurirwa vachibva vawira,” anodaro Agnes.
Tsaona iyi yakazozivikanwa nemumwe muvakidzani uyo akambenge aona vana apo akazoona vasisipo ndokuziva kuti vainge vawira mumugodhi.
Priscilla Rongoti (31) wesangano reJustice for Children Trust achishandira kuEpworth, anoti njodzi yakadai inorwadza zvikuru.
“Tiri kufamba tichikurudzira vanhu kuti vavakire migodhi yavo asi hapana anoterera, saka zvave kuda kuti vaite zvekumanikidzirwa,” anodaro Rongoti.
Kanzura wenzvimbo yeKaguvi Branch, VaJaphet Chiromo, vanoti vari kushushikana nekuwira kuri kuita vana nevanhu vakuru mumigodhi isina kuvakirirwa.
“Nhamo iyi yarwadza zvikuru — vana vaviri kufira mumugodhi? Svondo rapera takashaikirwa zvakare nemumwe mwana nekuwira mumugodhi. Tiri kushanda nemapurisa nemamwe masangano kuti vanhu vavakirire migodhi yavo,” vanodaro.
Mashoko avo anotsinhirwa nasachigaro wenzvimbo iyi VaWikas Boroma (41) vachiti vana vari kurasikirwa neupenyu nekuwira mumigodhi.
Mitumbi yevana ava yakazotakurwa nemapurisa ichiendeswa kuimba yerunyararo.